5 Inta Badan Ganacsatada Khaladaadka Caadi Ah | vfxAlert official blog
Caadooyinka ganacsiga xun
Marka, waxaad mar labaad maalgelisay koontadaada ganacsiga markale markanna waad hubtaa inaad taqaanno sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah . Waad fahantay sababta taxanihii ugu dambeeyay ee heshiisyadu u ahaayeen kuwa aan faa'iido lahayn, qaadashada deebaajiga oo dhan, waxaan hubnaa inaadan ku celin doonin khaladaadkan. Waad ka niyad jabsan tahay luminta lacagta, laakiin deebaaji cusub ayaa ku siinaya xoog cusub, waxaad dareemeysaa xoog si aad uga adkaato suuqa oo aad u hesho wadada saxda ah.
Wax ma ku xasuusineysaa? Ganacsato badan ayaa xaaladan ku jiray wax ka badan hal jeer, iyagoo helay dareen been ah oo rajo ah ka dib markii ay dib u soo buuxinayaan dhigaalka, ama ay si fudud ugu fikiraan "xilligan wuu ka duwanaan doonaa". Nasiib darrose, waxyaabahaas midkoodna xal uma aha dhibaatooyinka kuu sababaya inaad lacag lumiso. Waa waqtigii la joojin lahaa khaladaadka lagu xiro lacag cusub, akhrinta warbixinnada dhaqaalaha, ama iibsashada nidaamyo ganacsi oo cusub. Sababta dhabta ah ee luminta marwalba waxay ku jirtaa madaxaaga.
Aynu eegno 5 khaladaadka ugu caansan ee ka horjoogsada ganacsatada inay lacag ku helaan calaamadaha ikhtiyaariga ah ee calaamadaha forex, aan eegno xalalka qaar si loo tirtiro:
1. Ganacsigii wuxuu noqday maanyo
Ma seexataa, soo toostaa oo suuqyada ayaad neefsataa? Miyaad ku xisaabtantaa qodob kasta mawqifkaaga ama diidmadiisa? Raadi sabab kasta oo yar oo loo galo ama looga baxo? Miyaad iloobeysaa shaqooyinka guriga maxaa yeelay kama bixi kartid shaxankaaga? Tani waa xaqiiqo jirta ganacsatada qaar ee ku waalan ganacsigooda.
Maxay tani u dhaceysaa?
Sababta aad shucuurta ugu xirnaatay macaamil ganacsi waa in aad gelisay "aad" in badan oo aad ka sameysay suuqa, ma aragtid waddo kale oo farxad loogu helo noloshaan. Dareennadani waxay horseedayaan khatar badan oo hal ganacsi ah, iyo / ama ganacsi soo noqnoqda oo aan faa'iido lahayn. Mar alla markii aad tan bilowdid, WAA LA QAADAY. Waxaad u baahan tahay inaad KACDO, garato inaysan jirin gooyn gaaban; waa inaad ku dhaqantaa lacag wanaagsan iyo maaraynta halista, edbinta si joogto ah. Haddii aysan jirin ku xirnaansho shucuur ganacsi kasta ama calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, faa'iidooyinka ayaa dhakhso u muuqan doona.
2. Helitaanka joogtada ah ee cusub, wax ka beddelka shuruudaha hadda jira iyo xaaladaha macaamil ganacsi.
Tani waa caado aad u xun, sidaa darteed dhammaan dadka bilowga ah waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan xeeladaha xirfadleyda markay baranayaan ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ah: ka ganacsada sida uu qabo sharciga "fur iyo iloobi" . Tani waa sababta ay u shaqeyso:
Ma xasuusataa sida aadan udareemin shucuur ka ganacsiga koontada demo? Sababtu way fududahay - TAN MA AHA LACAG DHAB AH, WAAYIHAY LACAGTOODA MA LAHAYN CAWAAQIMO DHAQAALE. Qaab-dhismeedka noocan ah waa in lagu raaco xisaab dhab ah, ka dibna go'aammadu ay noqdaan kuwo sax ah oo macquul ahaan macquul ah. Xitaa markii calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ay muuqdaan, saameynta shucuurta waxay ka dhigi kartaa ganacsaduhu mid aan ujeedo lahayn, sababi kara rabitaan ah inuu ku xad gudbo maaraynta lacagta, iwm.
Xusuusnow, waxaan sameynaa falanqaynta suuqa KA HOR INTA AAN FURAN QIIMO. Tani macnaheedu maaha in xaaladuhu aysan soo kici doonin markaad u baahato inaad xirto ikhtiyaarka hadda jira ama aad si dhakhso leh u furto xulashada ka soo horjeedda. Laakiin, kuwa cusub, "fur iyo ilooba" waa istiraatiijiyadda ugu fiican.
3. Falanqeyn aad u badan.
Xaalad la yaqaan? Ganacsaduhu wuxuu xiraa shakiga ku saabsan saxsanaanta macaamil ganacsi isagoo si joogto ah u aqrinaya falanqaynta, wararka dhaqaalaha iyo rakibida softiweerka calaamadaha binary ee xiga. Tusaale: tirakoob ayaa soo baxay oo, sidaad u aragto, ka joojinaya macaamilka. Waxaa jira gargaar kumeelgaar ah, iyo 5 daqiiqo kadib shaxdu waxay u weecaneysaa saadaashaada.
Rabitaanka helitaanka macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah waa wax dabiici ah, laakiin haddii ay badan yihiin, waxay bilaabaysaa inay farageliso ganacsiga faa'iidada leh. Waxaad ka heli kartaa fikradaha kala duwan internetka: qaar waxay dhahaan suuqa ayaa koraya, kan labaadna wuu dhacayaa. Immisa ganacsade ayaa leh fikrado aad u tiro badan, oo adiga kaliya ayaa halis gelin kara lacag.
Si aad uga baxdo "curyaannimada gorfaynta", waxaad u baahan tahay oo keliya inaad aqbasho xaqiiqda in jaantusku ka tarjumayo dhammaan isbeddelada suuqa, ka dibna aad baranayso sida loo akhriyo loona uga ganacsado calaamadaha ganacsiga nool ee saxda ah ee ka imanaya isbeddelka hadda jira, qaabka farsamada ama laambadda. Isla marka aad kalsooni ku qabtid awoodaada inaad akhriso jaantuska, waxaad iska iloobi doontaa dhammaan wararka muranka badan dhaliyay ee buuxinaya internetka. Isku kalsoonow, ha noqon falanqeeyayaasha qaaliga ah. Badanaa, tani waa ganacsade xun.
4. Raadi istiraatiijiyad leh 100% faa'iido (Grail) .
Aynu u furano qarsoodi akhristayaasha - Grail wuxuu ku jiraa ganacsiga. Nolosha caadiga ah, waxaa loo yaqaan "samir." Sabirku runtii waa mid ka mid ah qodobbada guusha ugu muhiimsan ee ka ganacsanaya hanti kasta. Haddii aad ogtahay waxa aad ka raadineyso jaantuska, istaraatiijiyadaada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee saxda ah ayaa soo muuqan doonta. Xitaa haddii ay noqon doonto faa'iido 5-10% bishiiba, wax qalad ah kuma laha taas.
Dad badan ayaa iskudaya inay kasbadaan 100% maalinta ugu horeysa kadib markay furaan xisaab. Tani waxay noqon doontaa rabitaan xoog leh oo lagu raadsado Grail ka mid ah nidaamyada ganacsiga, ka dibna, markay ganacsatadu ogaadaan inuusan jirin nidaam ganacsi oo dhammaystiran, waxay bilaabaan inay ula dhaqmaan xulashooyinka sidii ciyaar fursad ah maxaa yeelay ma joojin karaan isku dayga ah inay si dhakhso leh u taajiraan.
Samir ahaan shucuur ahaan ayaa ugu dhow Grail iyo guusha ganacsiga. Waxay ku timaaddaa hanashada istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh marka aad leedahay qorshe ganacsi maxaa yeelay waxaad si sax ah u ogtahay 100% waxa aad raadineyso iyo goorta laga ganacsanayo. Waa inaad aqbashaa oo aad aamintaa hal fikrad ganacsi oo aad si fiican u maamushaa. Looma baahna in la rogrogo oo la beddelo markasta hal ama laba meheradood oo aan guuleysan ka dib. Shakigaaga, hungurigaaga iyo hubin la’aantaadu waa inay xakameeyaan; haddii kale, waligaa awood uma yeelan doontid inaad lacag sameysato markasta.
5. Isbedelka joogtada ah ee qalabka, istaraatiijiyadaha, wuxuu adeegsadaa "hababka ugu fiican ee qoraaga" .
Dood-wadaagyo iyo goobo badan oo loogu talagalay ganacsiga, dhexdhexaadiyeyaashu waxay xiraan mawduucyada doodda ee xeeladaha adag iyo tilmaamayaasha, iyagoo og ogaal la'aan. Laakiin way sii wadaan inay muuqdaan, waxay umuuqataa inay dadku leeyihiin ujeedo dabiici ah waxyaalahan oo kale. Waxaa laga yaabaa in qof maamulo inuu lacag ka sameeyo iyaga, laakiin ka hor intaadan adeegsan farsamo kasta oo falanqeyn farsamo ama calaamadaha binary auto, maskaxda ku hay xayiraadaha soo socda:
Suuqa waa mid firfircoon oo markasta isbedelaya. Xeerar adag oo xeerar ganacsi ah si hufan ugama shaqeyn karaan muddada dhexe iyo muddada fog. Xaaladdu waa cusub tahay maalin kasta, barnaamijyada kombuyuutarraduna dib iskama ay baari karaan mar kasta oo suuqa isbeddelo. Halkan, maskaxda bini'aadamka ayaa hal talaabo ka horeysa lataliyayaasha otomaatiga ah.
Calaamadaha binary ee bilaashka ah ma garanayaan marka dulqaadka loo baahan yahay iyo goorta aan loo baahnayn. Dareen sifiican u horumarsan oo ah ka ganacsiga dhaqdhaqaaqa qiimaha ayaa ka adkaada kombiyuutarka maxaa yeelay waxaa jira arrimo badan oo qarsoon oo indhaha aadanaha oo keliya ay arki karaan. Haddii algorithm ay ku aragto xaaladeeda suuqa, waxay soo saari doontaa calaamad si loo furo ama loo xiro ganacsi, iyadoon loo eegin wax shuruudo kale ah oo tilmaamaya inay ka fiican tahay ka joogida suuqa.
Dareenka aadanaha iyo fikradaha "qiimaha saxda ah" ee suuqa ayaa ah wadayaasha ugu weyn ee dhaqdhaqaaqa qiimaha dhammaan suuqyada. Marka maxaad isku daydaa inaad ka ganacsato suuqa kaliya adigoo kaashanaya tilmaamayaasha ama aalado? Si kale haddii loo dhigo, bani'aadamku waa musharraxa ugu fiican ee akhrinta iyo fahamka dhaqdhaqaaqa qiimaha, xitaa haddii Ganacsi-Joogto-badan (HFT).
Adeegsiga xeeladaha qalafsan waxay noqon kartaa cawaaqib is-weydaarsiga sare u kaca ee ganacsade uu bilaabo inuu tixgeliyo isaga mid gaar ah, awood u leh inuu wax ka arko dadka kale oo uu furo heshiis "ka dhan ah". Dabcan, isku kalsoonaanta ayaa loo baahan yahay, laakiin waa marka la xakameeyo. Yaynaan khiyaanayn nafteenna - kaliya kuwa sameeya suuqa ayaa runti u dhaqaajiya qiimaha jihada saxda ah. Suuqa intiisa kale "dad badan" ayaa ka wanaagsan in ay isku dhegaan oo ay isku dayaan in ay dabaashaan oo aan ka soo horjeedin, laakiin gadaashooda. Haddii kale, khasaaruhu wuxuu u imaan doonaa si dhakhso leh oo aadan heli doonin waqti aad ku hesho bixiyaha calaamadaha binary ee ugu fiican ama si fudud u xirto ganacsiyada hadda jira.
Soo koob . Dhaqdhaqaaqa sicirka wuxuu muujinayaa habka fikirka ee kaqeybgalayaasha suuqa oo dhan wuxuuna ka tarjumayaa aragti guud ee suuqa. Sidaa darteed, markaan baranay inaan akhrino dhaqdhaqaaqa qiimaha fudud ee suuqa, waxaan awoodi doonnaa inaan helno qaabab iyo dejinno, aan fahano sida calaamadaha ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay ula shaqeeyaan macquul ahaanta sare ee macaashka. SHAQO FUDUD…